Dowladda Uganda oo laga dalbaday in ay baaritaan ku sameyso qalalaasihii ka dhacay dalkaas – The Voice of Northeastern Kenya
Dowladda Uganda oo laga dalbaday in ay baaritaan ku sameyso qalalaasihii ka dhacay dalkaas
Star FM November 29, 2016
Hay’adda u doodad xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa dowladda Uganda ka dalbatay in ay baaritaanno lagu kalsoonaan karo ku sameyso isku dhacyadii dadka badan ku dhinteen ee dhawaan ka dhacay dlakaasi.
War saxaafaded kasoo baxay hay’addaan oo nuqul ka mid ah ay soo gaarsiisay Idaacaddan Star Fm ayey ku sheegtay in ay ka walaacsantahay tobannaanka qof ee ku dhintay isku dhacyadaasi oo u dhexeeyay booliska iyo maleyshiyo beeleed ilaalo u ah mid ka mid ah boqortooyooyinka qabaa’ilka.
Qalalaasahaasi oo socday maalmihii 26-ka iyo 27-ka bishaan November ayaa sababay in xabsiga loo taxaabo iyo yaraan 139 ruux oo lagu eedeeyay in ay ku lug leeyihiin rasbahadaha.
Wali waxaan si rasmi ah loo ogeyn macluumaad ku saabsan dagaalkaasi, sida tirada saxda ah eek u dhimatay, in kastoo markii hore ay soo baxayeen warar sheegaya in lagu dilay 55 ruux oo ay ku jiraan askar ka tirsan booliska.
Xaaladda magaalada Kasese ee ay isku dhacyada ka dheceen ayaa lagu soo waramayaa in ay xasiloontahay, wallow ay xiisadaha wali ka taaganyihiin.
← Dowladda oo beenisay in isbadal lagu sameynayo waqtiga doorashada
Maamul goboleedyada dalka oo laga codsaday in ay dhalinyarada maal galiyaan →